I-Fat Loss powder-series suppliers - i-AASraw powder
/ iimveliso / Fat Ukulahleka kompu
Singabanikezeli be-Fat Loss powder, iFat Loss powder yokuthengisa, Njengoko sithembisile, yonke iPower Loss powder yethu ihlambulukileyo ayikho ngaphantsi kwe-98%.
Kukho izixazululo ezininzi zokulahlekelwa kwesisindo.
Oku kubandakanya zonke iintlobo zeepilisi, iziyobisi kunye nezongezelelo zendalo.
Ezi zifunwa kukukunceda ulahlekelwe isisindo, okanye ubuncinane wenze kube lula ukunciphisa umzimba kunye nezinye iindlela.
Bavame ukusebenza ngeyodwa okanye ngaphezulu kwezi ndlela:
Nciphisa ukutya, okwenza uzive ugcwele ngakumbi ukuze udle iikhalori ezimbalwa
Ukunciphisa ukondla kwezondlo ezifana neoli, ukwenza ukuba uthathe iikhalori ezimbalwa
Ukwandisa ukutshisa kweoli, ukwenza utshise iikhalori ezininzi
Ingaba unyango luya kuthatha indawo yomsebenzi kunye nokutya okunempilo njengendlela yokunciphisa umzimba?
Amachiza awawuthathi indawo yokusebenza ngokomzimba okanye ukutya okunempilo njengendlela yokunciphisa umzimba. Uphononongo lubonisa ukuba imishanguzo-ukulahlekelwa kwemithi ihamba kakuhle xa idibene nenkqubo yokuphila. Buza ugqirha wakho okanye olunye uphando lwezempilo malunga neenkqubo zokunyanga kwendlela yokuphila yokulawula ukunyusa okuza kusebenza kuwe.
Ziziphi iingenelo zokusebenzisa imishanguzo yokuchithwa kwemithi ukuze unciphise umzimba?
Xa zidibaniswe nezinguqu ekuziphatheni, kuquka ukutya kunye nemisebenzi yomzimba, imishanguzo yonyango ingancedisa abanye abantu ukuba banciphise ubunzima. Ngokomyinge, abantu abafumana unyango lwamayeza njengenxalenye yeprogram yokuphila balahlekelwa phakathi kwe-3 kunye ne-9 yepesenti ngaphezulu kokuqala komzimba wabo kunabantu abakwinkqubo yokuphila abangathathi unyango. Uphando lubonisa ukuba abanye abantu abathabatha imithi yokunciphisa imithwalo yokulahlekelwa kwemithi baye balahlekelwa ipesenti ze-10 okanye ngaphezulu kobunzima bokuqala. Iziphumo ze-1 ziyahlukahluka ngamayeza nangomntu.
Ukunyuka kwe-5 ukuya kwi-10 yeepesenti yokuqala kwesisindo somzimba kunokunceda ukuphucula impilo yakho ngokunciphisa ishukela legazi, uxinzelelo lwegazi kunye ne-triglycerides. Ukulahlekelwa isisindo kunokuphucula ezinye iingxaki zempilo ezinxulumene nokugqithisa nokugqithisa, njengentlungu edibeneyo okanye i-apnea yokulala. Ubuninzi obunzima bokulahleka kwenzeka kwiinyanga zokuqala ze-6 zokuqala imithi.
Nantsi into omele uyazi ngokumalunga nemithi yokulahleka kwesisindo somzimba: I-Orlistat powder, I-Bitter Orange / Synephrine powder, i-Sibutramine powder, i-Clenbuterol HCL powder, iPhentermine powder kunye ne-Lorcaserin HCL powder, i-Cetilistat powder.
1. I-Orlistat powder
I-Orlistat powder iyisisisi seyeza, esithengiswa ngaphaya kwe-counter phantsi kwegama elithi Alli, kwaye phantsi komgunyathi njenge-Xenical. I-Orlistat powder, eyaziwa nangokuthi i-Alli okanye i-Xenical, inokunciphisa inani lamanqatha oyithathayo ekudleni kunye nokukunceda ulahlekelwe isisindo. Unempembelelo emininzi, eminye yayo ayimnandi.
Ngokuthakazelisayo, ukutya okunomdaka ophantsi (ngaphandle kweziyobisi) kuboniswe ukuba kusebenza njengowokutya kunye ne-fat-fat edibeneyo.
2. I-Bitter Orange / Synephrine powder
Uhlobo olune-orange olubizwa ngokuba lu-orange oluneziqhamo luqulethe i-synephrine powder. I-powder Synephrine inxulumene ne-ephedrin, eyayisetyenziswa njengesithintelo esithandwayo kwimilinganiselo eyahlukeneyo yokulahlekelwa kweepilisi.
I-Synephrine powder ivuselela ngamandla, kwaye mhlawumbi iphumelele ukulahleka kwesisindo ngexesha elifutshane. Nangona kunjalo, imiphumo yecala ingaba yingozi, ngoko oku kufuneka kusetyenziswe kuphela ngokuqaphela okukhulu.
I-Sibutramine powder ichaphazela iikhemikhali kwingqondo echaphazela ukugcinwa kwesisindo. I-Sibutramine powder isetyenziselwa kunye nokutya kunye nokuzivocavoca ukuphatha ukukhuluphala okunokuthi kunxulumene nesifo sikashukela, i-cholesterol ephezulu, okanye uxinzelelo lwegazi oluphezulu.
I-Sibutramine powder ingathathwa kunye okanye ngaphandle kokutya. Umele ulahlekelwe ubuncinane ubunzima beeplani eziyi-4 ngexesha leeveki zokuqala ze-4 zokuthatha i-sibutramine powder kunye nokutya ukutya okukhalori. Tshela ugqirha wakho ukuba awulahlekelwa ubuncinane ubunzima beeplani ezingama-4 emva kokuthatha iyeza kwiiveki ze-4.
4. I-Clenbuterol HCL powder
I-Clenbutrol i-HCL powder iyongezelelo elenza ukulinganisa ukutshisa kweoli kunye nokulahleka kwesisindo se-Clenbuterol HCL powder. Iziphumo ze-HCL ze-powder ze-HCL ziyamangalisa kwaye ziye zaxhaswa yiqela labantu abadumileyo kunye nabadlali, kuquka uJessica Hardy noVictoria Beckham. Utshisa amafutha ngokuthi "ukwandisa izinga apho amanqamzana omzimba ahlanganiswa khona ngelixa ukwandisa izinga lomzimba lomzimba" - ngamanye amazwi, liyi-drug loss loss drug.
Ukuthenga i-genius isisindo sokulahleka / isidlo sokutya esidakayo sidinga ukuba siqaphele, ingakumbi ngokuthengwa kwe-intanethi kumazwe ngamazwe. Kukho imithombo emibini emininzi abathi amabango anikezela ngeempahla zengqondo kodwa zibonakaliswe njengabagxeki. I-AASraw inikezela kwaye inikezela ngempahla yengqondo.
Ukubonisa 1-8 kweziphumo 14